Zimbabwecricket Archives - Zim Morning Post
Home » Zimbabwecricket
8 September 2021; Sikandar Raza of Zimbabwe during match one of the Dafanews International Cup ODI series between Ireland and Zimbabwe at Stormont in Belfast. Photo by Seb Daly/Sportsfile
STAFF WRITER Zimbabwe – 266-7 in 50 overs (Craig Ervine 64, Sikandar Raza 59*, Brendan Taylor 49; Simi Singh 1/22, George Dockrell 1/23, Andy McBrine 1/26) Ireland – 228 all…
Comments Off on Zimbabwe defeat Ireland to get Super League series off to a flyer
2 September 2021; Wessley Madhevere of Zimbabwe during match four of the Dafanews T20 series between Ireland and Zimbabwe at Bready Cricket Club in Magheramason, Tyrone. Photo by Harry Murphy/Sportsfile
Zimbabwe humiliated as Ireland secure T20I series victory
STAFF WRITER Ireland – 174-4 in 20 overs (Kevin O'Brien 47, Paul Stirling 39, Andy Balbirnie 36; Wellington Masakadza 2/22, Richard Ngarava 1/25, Luke Jongwe 1/28) Zimbabwe – 110-9 in…
Comments Off on Zimbabwe humiliated as Ireland secure T20I series victory
29 August 2021; Ireland wicketkeeper Neil Rock attempts to run-out Zimbabwe's Dion Myers during match two of the Dafanews T20 series between Ireland and Zimbabwe at Clontarf Cricket Club in Dublin. Photo by Seb Daly/Sportsfile
Zimbabwe – 152-5 in 20 overs (Milton Shumba 46*, Ryan Burl 37*, Wessly Madhevere 21; Shane Getkate 3/20, Ben White 1/33) Ireland – 153-3 in 18.3 overs (Kevin O'Brien 60,…
Comments Off on Shumba, Burl fireworks in vain as Ireland level series
Zimbabwe cricketer Kyle Jarvis celebrates after the dismissal of Bangladesh cricketer Imrul Kayes during the first day of the second Test cricket match between Bangladesh and Zimbabwe at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka on November 11, 2018. (Photo by MUNIR UZ ZAMAN / AFP) (Photo credit should read MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images)
Zimbabwe Cricket (ZC) has appointed former international players Elton Chigumbura and Kyle Jarvis as national talent scouts. In their new role, the duo will be responsible for identifying players from…
Comments Off on ZC appoints Chigumbura, Jarvis as talent scouts
Zimbabwe Cricket confirms four COVID-19 cases
Zimbabwe Cricket confirms four COVID-19 cases Zimbabwe Cricket (ZC) can confirm Zimbabwe international players Regis Chakabva and Timycen Maruma – who are both not part of the side currently touring…
Comments Off on Zimbabwe Cricket confirms four COVID-19 cases
Chibhabha aims to get Zimbabwe off to a flying start Zimbabwe cricket captain Chamu Chibhabha is looking to get his side’s campaign for a place at the next ICC Cricket…
Comments Off on Chibhabha aims to get Zimbabwe off to a flying start
Zimbabwe Cricket unveils women’s one-day and T20 competitions
Zimbabwe Cricket unveils women’s one-day and T20 competitions Zimbabwe Cricket (ZC) has launched two new domestic competitions for women scheduled to begin this month. Four provincial women’s teams – Eagles,…
Comments Off on Zimbabwe Cricket unveils women’s one-day and T20 competitions
President Mnangagwa unveils cricket tourism campaign President Emmerson Mnagangwa has officially launched a promotional campaign spearheaded by Zimbabwe Cricket (ZC) aimed at boosting the country’s tourism. ZC is working on…
Comments Off on President Mnangagwa unveils cricket tourism campaign
After enduring more than half-a-year – 28 weeks or 196 days to be exact – without playing any cricket since sporting activities in the country were banned as part of…
Comments Off on Zimbabwe players enjoy their first match in six months
ZIMBABWE Cricket (ZC) has annulled the 2019/20 domestic season due to the coronavirus pandemic. This means the first-class competition, the Logan Cup, and the List A contest, the Pro50 Championship,…
Comments Off on Zimbabwe Cricket voids season due to coronavirus pandemic